अन्तर्वार्ता – " कञ्चनजंगा News "
अस्ट्रेलियामा वृद्ध महिलासँग ला’खौं ठ’ग्ने २ नेपाली जे’ल च’ला’न
No Comments on अस्ट्रेलियामा वृद्ध महिलासँग ला’खौं ठ’ग्ने २ नेपाली जे’ल च’ला’न
काठमाडौं- अस्ट्रेलियामा ठ’गी आ’रो’प’मा प’क्रा’उ परेका दुई जना नेपालीलाई जे’ल पठाइएको छ ।
पश्चिमी सिड्नीकी एक वृद्ध महिलासँग हजारौं डलर ठ’गी गरेको आ’रो’प’मा उनीहरुलाई सिड्नीस्थित एक अ’दा’ल’तले जे’ल चलान गरेको हो ।
प्रहरीले २२ वर्षकी नेहा गिरी र १९ वर्षका आयुष भट्टराईलाई स्थानीय समयअनुसार सोमबार अपरान्ह साढे ४ बजे टेलोपियामा एक घरबाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
अस्ट्रेलियाको समाचार वेबसाइट नाइनन्यूजका अनुसार यी दुईलाई बेइमानी र धोखाधडीबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको ५ वटा आरोप र जानीजानी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको ३ वटा आरोप लागेको छ । उनीहरुले ८५ वर्षकी एक महिलालाई झुक्याएर हजारौं डलर ठगी गरेको आरोप छ ।
समाचारमा जनाइए अनुसार पीडित ८५ वर्षकी महिलालाई एउटा फोन कल आएको थियो । फोन गर्नेले आफू उनको बैंकबाट बोलेको भन्दै उनको बैंक खाता रोक्का भएकोले उनले अर्को खाता खोल्नुपर्ने बताएका थिए । फोन गर्नेले महिलालाई एक कुरियरलाई ३ हजार डलर दिन भनेका थिए । कुरियरका कर्मचारी महिलाको घरमै आउने र त्यो रकम उनको खातामा जम्मा गरिने बताइएको थियो ।
महिलाले कुरियल वालालाई ३ हजार डलर दिइन् र यसबारे पुलिसलाई पनि जानकारी दिइन् । पछि महिलालाई फेरि अर्को फोन कल आयो । फोन गर्नेले उनलाई अझै ५ हजार डलर दिनुपर्ने बताए । पुलिसले नेपाली जोडीलाई सोमबार ती महिलाको घरमा पैसा लिन आएको बेला पक्राउ गरेको जनाइएको छ ।
गिरी र भट्टराईलाई मंगलबार पारामाट्टाको स्थानीय अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । अदालतमा यी दुवैले जमानतको लागि अर्को प्रयासस्वरुप कुनै आवेदन नगरेको बताइएको छ । अदालतले उनीहरुलाई जेल पठाएको छ । अब उनीहरुलाई अगष्ट २० मा फेरि अदालतमा उपस्थित गराइनेछ ।
कालापानी चीन-भारतलाई लिजमा दिन सुजाता कोइरालाको सुझाव (भिडियोसहित)
No Comments on कालापानी चीन-भारतलाई लिजमा दिन सुजाता कोइरालाको सुझाव (भिडियोसहित)
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानीलगायत भूमि लिजमा दिन सकिने बताएकी छन्। नेपाल सरकारसँग उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि आर्थिक स्रोत नभएको भन्दै उक्त भूमि भारत-चीनलाई लिजमा दिएर आम्दानी गर्न सकिने उनले जनाएकी हुन्।
प्राइम टेलिभिजनको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै नेतृ कोइरालाले चीन, अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकले आफ्नो भूमि लिजमा लिने गरेको उदाहरण दिँदै उक्त विकल्पबारे सोच्न सरकारलाई सुझाव दिएकी हुन्। ‘चाइना र इन्डियाले त्यहाँ (कालापानी क्षेत्र) बाट व्यापार गर्ने हो भने राम्रो कुरा हो,’ टेलिभिजन अन्तवार्तामा उनले भनेकी छन, ‘हामीले त बाटो बनाउन सक्दैनौं, हामी त्यहाँसम्म पुग्न पनि सक्दैनौ, धेरै अप्ठयारो छ, हामी नेपालीसँग पैसा पनि छैन।’
नेतृ कोइरालाले अन्तर्वार्तामा भनेकी छन्, ‘उनी (भारत-चीन) हरूले नेपाललाई पनि ‘इन्क्लुड’ गराउनुपर्‍यो त्यो व्यापारमा, नेपाललाई कर पनि तिर्नुपर्‍यो- हाम्रो ल्यान्ड युज गरेकोमा। केही सहमति गर्न सकिन्छ, नगर्न सकिने हैन?’
‘ यसका लागि के गर्न सकिन्छ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, ‘धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, अरु मुलुकमा। चीनले पनि कतिपय आइल्यान्ड लिजमा लिएको छ। अमेरिकाले पनि लिजमा लिएको हुन्छ, पैसा तिरेको हुन्छ। यसबाट ‘सोर्स अफ इनकम’ पनि हुन्छ, त्यो मुलुकमा। त्यो पनि एउटा सम्भावना छ-यसबारे छलफल त हुनुपर्‍यो नि!’
‘उसो भए, कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता पठाउन सकिन्छ?’
‘वार्ता नगरिकन म भन्न सक्दिनँ, फिर्ता गराउने प्रयास गरौं, नत्र अरु विकल्प पनि छन्,’ कोइरालाले जवाफ दिएकी छन्।
धेरै विकल्पहरू भए पनि जग्गा लिजमा दिनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। ‘त्यो ल्यान्डे हामी युज गर्न सक्दैनौ, त्यसलाई ‘डिभलप’ पनि गर्न सक्देनौ, त्यो लिजबाट हामीले भन्नु न सर्टअन एमाउन्ट उनीहरूसित वर्षको पनि लिन सक्छौं। त्यो रिसोर्स पनि हुन्छ, सोर्स पनि हुन्छ। थप ‘इनकम’ पनि हुन्छ नेपालका लागि।’
उनले कालापानीलगायतका भूमि लिजमा दिनुपर्नेसहित अर्को वैकल्पिक प्रस्ताव पनि गरेकी छन्। उनले कालापानीसँग अन्य भूमि साटफेर गर्न सकिने तर्क पनि गरेकी छन्। ‘साटफेरबाट अर्को जमिन लिन सक्छौं, समुद्र नजिकको ‘ल्यान्ड’ माग्न सक्छौं।’
लिज तथा भूमि साटफेरबारे आफ्नो सुझावलाई ‘सानो बुद्धि’ को कुरा हो भन्न पनि उनले छुटाएकी छैनन्। अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘आफ्नो सानो बुद्धिले सोचेको कुरा हो, अरुको कन्ट्रीको हेरेर भनेको हो।’
त्यसो त अन्तर्वार्तामा नेतृ कोइराला भारतले कालापानीलाई आफ्नो भूमि किन भनेको हो? त्यो बुझ्न नसकेको स्वीकार गर्छिन्। ‘भारतले किन कालापानीलगायतलाई आफ्नो भन्यो, यो बुझ्नसक्या छैन, सरकारले त्यसबारे प्रश्न गरिरहेको छ, भनिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्।
कालापानीका विषयमा पुत्ला जलाएर केही नहुने उनको तर्क छ। उनी भन्छिन, ‘पुत्ला जलाएर केही पाइन्नँ, सिरियस्ली वार्ता गर्नुपर्दथ्यो, त्यो वार्ताको पहल कांग्रेसले गर्नुपर्दथ्यो।’
कालपानी लिम्पियाधुरालगायतका भूमि फर्काउनका लागि चीन र भारतसँग युद्ध गर्न नसकिने जनाउँदै प्रश्न गर्छिन, ‘इन्डिया र चीनसँग ‘वार’ गर्न सक्छौं? सक्दैनौं नि।’
भारतले बंगलादेशको सीमा समस्या ‘विन-विन’को अवस्थामा समाधान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालको हकमा पनि त्यही गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘जसरी भारतले बंगलादेशलाई सीमा समस्या समाधान गर्‍यो, हामी पनि ‘विन-विनड गर्न सक्छौं।’ सीमा समस्याबारे वार्ता र सहमतिको आधारमा गर्नुपर्नेमा भने उनी दृढ देखिएकी छन्।
निता ढुंगानालाई विवाह गर्न हतार तर केटा नपाएर हैरान (भिडियो)
No Comments on निता ढुंगानालाई विवाह गर्न हतार तर केटा नपाएर हैरान (भिडियो)
काठमाडौ । नायिका निता ढुंगाना अहिले आफ्नो रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘कर्मा’ को प्रचार प्रसारमा रहेको बेला आफुलाई विवाह गर्न हतार भएको बताएकी छिन् ।
निता दुंगानाले क्यानाडा नेपालसंग कुराकानी गर्दै भनिन्, “मलाई विवाह गर्न रहर लागेको छ तर विवाह गर्न केटा भेटाउन गाह्रो रहेछ । खोज्न पनि लाएकी छु तर अहिले सम्म कोही भेटिएको छैन र जुरेको पनि छैन । मिल्ने केटा पाए म विवाह गर्न तयार अवस्थामा छु । यो वर्ष त होईन अर्को वर्ष सम्म पक्का मेरो विवाह हुन्छ भन्ने लागेको छ ।”
नायिका निता दुंगानाले अहिले चलचित्र निर्माणमा हात हालेकी छिन र चाडै नै चलचित्र फ्लोरमा लाने तयारीमा जुटेकी छिन् । दुई वर्ष अघि आफ्नो जन्मदिनमा चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी निताले अहिले आएर मात्र फ्लोरमा जाने पक्का गरेकी छिन् ।
घोषणा गरेको दुई वर्ष पश्चात मात्र किन बल्ल फ्लोरमा जान लाग्यो भने सोध्दा निता भन्छिन्, “सुरुमा चलचित्रको कन्सेप्ट मन परेर निर्माणको घोषणा गरे तर त्यो बेला निर्देशक नै हराए र चलचित्र रोकियो । त्यस पश्चात पैसा नि कमि भयो र चलचित्र रोकियो र कहिले पैसा हुँदा राम्रो कन्सेप्ट हात लागेन । अहिले आएर सबै कुरा मिलेको छ र चलचित्र फ्लोरमा जाँदैछ ।”
निता ढुंगानाको प्रेम र ब्रेकअपको गसिपले मिडिया घरिघरि तात्तिने गर्थ्यो । आमेश भण्डारीसंगको ब्रेकअप पश्चात निता ढुंगाना अहिले सिंगल बस्दै आएकी छिन ।
No Comments on प्रेमविवाह नै गर्छु
‘र्‍याम्प सो’ तथा ‘प्रोडक्ट विज्ञापन’की मोडल हुन्, सृजु खरेल । काभ्रे फलाटे पुख्र्यौली घर भए पनि काठमाडौंमा उनको जन्म भयो। तीन वर्षअघि ‘मनसुन फेसन परेड’मा ‘क्याटवाक’ गरेपछि उनको मोडलिङ यात्रा सुरु भएको हो । सृजुले सो परेडमा लगातार तीन वर्षस“गै कायरा फेसन परेड, फेसन नोभा नाइट, स्टार अन रेड कार्पेट फेसन, मोडल हन्ट रन वे फेसनलगायत दर्जन ‘¥याम्प सो’मा ‘क्याटवाक’ गरिसकेकी छन् । नाडा आटो सो, वाइवाइ पेपर एड, एनसेल पेपर एड, जारा फेसनको एड, दराजको एड, गोल्डस्टार पेपर एडसहित थुप्रै विज्ञापनमा काम गरिसकेकी छन्, उनले। हाल, कम्युटर साइन्समा प्लस टु अध्ययनरत सृजुस“ग राजधानी दैनिकका डब्बु क्षत्रीले गरेको सटकट संवाद :
मोडलिङमै किन ?– रहर नै हो । ‘करिअर’ बन्छ भनेर होइन ।
मोडलिङमा करिअर नदेख्नुको कारण ?– यसमा पैसा कमाइ राम्रो छैन । अहिले आफूलाई व्यस्त राख्नका लागि हो । मेरो लक्ष्य कि त अन्तर्राष्ट्रिय एयर होस्टेज बन्ने हो, कि आईटी इन्जिनियर ।, त्यसो भए मोडलिºमाथि चढ्ने खुड्किलो मात्र हो त ?- खुड्किलोभन्दा पनि समाजमा आफूलाई घुलमिल गराउन र अनुभव लिनका लागि मोडलिङमा लागेकी हुँ ।
नायिकाका रूपमा जानका लागि पो हो कि ?– हैन, अहिले नै नायिका बन्ने चाहना छैन । गत वर्ष निर्देशक रमेश कोइरालाबाट नायिकाको प्रस्ताव आएको थियो । तर, मैले काम गरिन“ । राम्रो ब्यानरबाट प्रस्ताव आयो भने त्यति बेला सोच्न सकिन्छ ।, मोडलिङको कमाइ कस्तो छ ?– कामको इज्जतका लागि पनि पैसा लिन्छु । इभेन्ट हेरेर पनि लिने गरेकी छु । ठिकै छ भन्नुप¥यो ।
मोडलिङ बाहेक अरु केही ?– म तेक्वान्दोको राष्ट्रिय खेलाडी थिएँ । म ब्ल्याक बेल्ट पनि हु“ । २०७४ मा तेक्वान्दोबाट राष्ट्रिय गेम खेलें । त्यसपछि पढाइले गर्दा छाडेकी हुँ । अब खेलमा लाग्छु । त्यसबाहेक डान्स गर्छु र भलिबल पनि खेल्छु ।, पढाइमै व्यस्त हो कि प्रेमसम्बन्धमा पनि ?– अहिलेसम्म सिंगल नै हो, रिलेसनसिपमा छु ।
कारण ? प्रेम मन पर्दैन ?– पर्छ नि! मेरो पछि लाग्ने पनि छन् । म भविष्यमा प्रेमविवाह नै गर्छु । पहिला जिन्दगी बनाऊँ । त्यसपछि प्रेम गरेर घरबार बसाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छु ।, कस्तो केटा मन पर्छ ?– ट्यालेन्ट । मलाई बुझ्नसक्ने, माया गर्ने र आफैंमा सक्षम केटा मन पर्छ ।
श्वेता खड्काले भनिन्,–नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ (भिडियो सहित)
No Comments on श्वेता खड्काले भनिन्,–नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ (भिडियो सहित)
काठमाडौं, चर्चित नायिका श्वेता खड्काले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् । शनिबार राति प्राईम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नायिका खड्काले यस्तो बताएकी हुन् ।
नायिका खड्काले नेपाली चलचित्र विगतभन्दा अहिले धेरै सफल भएको टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले भनिन्,‘नेपाली चलचत्रि पहिलेभन्दा अहिले धेरै सफल भएको छ । तर, सय वटा मुभी बन्दा ९० वटा फ्लप भएका छन् । यो चाहीँ दुःखलाग्दो कुरा हो । यसबारेमा सोच्नुपर्छ ।’
फरक प्रसँगमा उनले आफूलाई मन पराउने र विवाहको लागि प्रस्ताव राख्नेको संख्या ठूलो रहेको पनि खुलासा गरिन् । उनले भनिन्,‘परिवारमार्फत विवाहको लागि प्रस्ताव धेरै आएका छन् । तर, म यसको लागि तयार छैन् । मलाई मन पराउने धेरै छन् । तर, म मन पराउँदिन् ।
कोहिनूर फिल्म रिलिज हुँदै थियो । कहाँ भेटिएलाका जोडी श्रीकृष्ण श्रेठ र श्वेता स्क्रिनिङ हुँदै थिए । चर्चीत अभिनेता र अभिनेत्रीको अभिनयको पर्खाइमा थिए दर्शक । कति फ्यानको चाहाना थियो होला, ‘श्रीकृष्ण(श्वेता’लाई हलमा भेट्ने ।
यही बीचमा आएको थियो । श्रीकृष्ण र श्वेताको विहेको खवर । यो त्यही जोडि थियो जसले केही समय पहिले सँगै होटेल व्यवसाय थालेका थिए ।
सम्पन्न परिवारकी श्वेता पुल्पुलिएरै हुर्कीएकी थिइन् । भन्छिन्, ‘१६ वर्षसम्म मलाई नपुग्दो केही थिएन । घरको निकै प्यारी छोरी थिएँ ।’ सायद घरमा ज्वाइँको खाँचो थियो । त्यसैले, नयाँ(नयाँ केटाहरुको फोटो घरमा आइ नै रहेको हुन्थ्यो । श्वेता भन्थिन्, ‘म आफैं छनोट गर्न सक्ने भएपछि मात्र बिहे गर्छु।’
श्वेताले घरमा मात्र होइन, घर बाहिर पनि अत्यधिक सामना गर्ने प्रश्न थियो, ‘विवाह कहिले रु’ त्यो किनभने उनी चर्चित अभिनेत्री थिइन् । श्वेताको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, ‘जन्म, मृ त्यु र विवाह कसैको हातमा हुँदैन ।’
भयो पनि त्यस्तै । ६ कक्षामै श्रीकृष्ण अभिनित फिल्मको गीत चट्ट रुमाल क्यामुलुमा छमछमी नाच्ने श्वेताले कहाँ सोचेकी थिइन् र श्रकृष्णसँगै लगन गाँठो कसिन्छ भनेर । उनको लागि अभिनय पनि कल्पना बाहिरको कुरा थियो ।
भन्छन् नि जिन्दगी संयोग हो । कल्पना कम र संयोग बढीले चल्छ जिन्दगानी । ‘कहाँ भेटिएला’ श्वेताको त्यस्तै अद्भुत संयोग थियो । त्यो, भेटको डेट श्वेताको दाहिने हातको ट्युटुमा छ । त्यहीँ श्रीकृष्णलाई भेटिन, फिल्ममा छानिइन्, विस्तारै प्रेममा परिन् र बिहे गरिन् ।
मलाई ब्वाई फ्रेण्ड असहज लाग्छ : गायिका अन्जु पन्त (भिडियो सहित)
No Comments on मलाई ब्वाई फ्रेण्ड असहज लाग्छ : गायिका अन्जु पन्त (भिडियो सहित)
वाशिङ्टन डिसी, अमेरिका । ख्यातिप्राप्त गायिका अन्जु पन्तले दोस्रो विवाहको कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारेकी छिन् । बिबिध सांगितिक कार्यक्रमका का लागि अमेरिकामा रहेकी गायिका पन्तले डिसी नेपाल सँगको कुराकानीका क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेकी हुन ।
“दोस्रो विवाह उचित लाग्दैन” पन्तले थपिन “कतिबेला आएर मन परिवर्तन हुन्छ भन्ने थाहा नै नहुदो रैछ । त्यसैले ब्वाई फ्रेन्ड र ग्रल फ्रेन्ड मलाई असहज लाग्छ । “
गायक मनोज सेवा सँग पारपाचुके गरी एकल जीवन बिताउदै आएकी पन्त पछिल्लो समय अन्जु पन्त फाउन्डेशन संस्था खोलेर समाज सेवामा ब्यस्त भएकी छिन् ।
प्रस्तुत छ गायिका अन्जु पन्तसँग गरिएको कुराकानी :
प्रियंका कार्कीको बेस्टफ्रेण्डले खोलिन् पोल: र’क्सिले मा’त्तिदा प्रियंका यस्तो गर्छिन्
No Comments on प्रियंका कार्कीको बेस्टफ्रेण्डले खोलिन् पोल: र’क्सिले मा’त्तिदा प्रियंका यस्तो गर्छिन्
काठमाडौ । नायिका प्रियंका कार्की अहिले आफ्नो दोश्रो वेब सिरिजको तयारीमा व्यस्त रहेकी छिन् । प्रियंका कार्कीका केही मिल्ने साथिहरु मध्य एक हुन् फेसन डिजाइनर सिवांगी प्रधान जो संग आफ्नो वेब सिरिजको लागि विशेष सल्लाह गरिरहेकी छिन् ।
सिवांगी प्रधान र प्रियंका कार्कीको दोस्ती धेरै पुरानो हो । सिवांगीका डिजाईनमा बनेका पहिरणहरु प्रियंकाले प्राय लाईरहेकि हुन्छिन् । प्रियंकाको वजन र फिगर अनुरुप सिवांगीले ड्रेसहरु तयार पारिरहेकी हुन्छिन् र प्रियंकालाई पनि उनले बनाएको पहिरण लाउन सहज हुने र आकर्षण देखिने भएकाले सिवांगीलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने बताउछिन् । सिवांगी र प्रियंकाको दोस्ती पनि यहि शिलशिला मै गाडा हुँदै गयो । अहिले एक परिवार झैं सिवांगी र प्रियंकाको सम्बन्ध बनेको छ ।
क्यानाडा नेपालसंग प्रियंका र सिवांगीले आफ्नो दोस्तीका रमाईला किस्साहरु सुनाएका छन् । सिवांगीले प्रियंका कार्कीले र’क्सि खाएर मा’त्तिदा कस्तो सम्म गर्छिन् भन्ने कुराको पोल खोलेकी सम्म छिन् । सिवांगीका अनुसार प्रियंकाले थोरै र’क्सि खाएर नै लाग्ने गरेको र र’क्सि खाएपछि प्राय आफु संगै हुन्छिन् । हामी संगै खाएर रमाईलो चाहि गर्छौ भन्दै रमाईलो कुराहरु स्मरण गरेकी छिन् सिवांगीले ।
ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाह बिचको सम्बन्ध यस्तो रहेछ ! खुल्यो पर्दा पछाडिको राज (भिडियो हेर्नुस्)
No Comments on ज्ञानेन्द्र शाह र पारस शाह बिचको सम्बन्ध यस्तो रहेछ ! खुल्यो पर्दा पछाडिको राज (भिडियो हेर्नुस्)
सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत पूर्वयुवराज पारस शाह र सोनीका रोकायको एउटा विवादास्पद भिडियो भाइरल भएको छ । सुमन नामको अकाउन्टबाट अपलोड गरिएको उक्त भिडियोमा पूर्वयुवराज पारस शाह आफ्ना एक सुभेच्छुकसँग तर्क गरिरहेका देखिन्छन् ।
भिडियोमा पारसले आफ्ना शुभेच्छुकलाई कसैले पनि आफूर्लाइ राजावादी नभन्न भन्दै सबै जना नेपाली भएको बताएका छन् । ‘यो वादी उ वादी भनेर छुट्याउने हैन सबै नेपाली हो’ बुलेट मोटरसाइकलमा हेलमेट लगाएर बसिरहेका पारसले भनेका छन् ।
यस्तै हर्कत संगै पारस सोनिकासंग बिभिन्न ठाउमा घुम्न गएका कैयौ तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक हुन्छन् । यस्तै कुरालाईइ सोसल मिडिया र मिडियाले निक्कै स्थानका साथ बिभिन्न सुचना प्रकासित गर्छन् । यसै बिषयलाई लिएर बक्ता तथा कलाकार हरी उदाशि आफ्नो तर्क राख्दै यस्तो भन्छन् ।
पुरुष जोडीले मनाए दोश्रो वैवाहिक वर्षगाँठ (भिडियो)
No Comments on पुरुष जोडीले मनाए दोश्रो वैवाहिक वर्षगाँठ (भिडियो)
काठमाडौँ। पछिल्लो समय सबैको सामु लोकप्रिय भएका पुरुष जोडि हुन् निरज सुनुवार र आशिक लामा । सामाजिक सञ्जालमा निकै राम्रो जोडीको रुपमा चिनिएका उनीहरुले केहि समयअघि बुझिदेउ बोलको म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गरेका थिए । सबैले रुचाएको यो पुरुष जोडिले आज आफ्नो दोस्रो विवाह एनिभर्सरी मनाएका छन् ।
उनीहरुले आज आफ्नो दोस्रो एनिभर्सरी धुमधामले मनाएका छन् । यसैक्रममा उनीहरुले आफ्नो दोस्रो एनिभर्सरी मनाउदै गर्दा क्यानडा नेपालका सम्वाददाता सन्तोष निरौला पुगेका छन् । उनले ती भाइरल जोडीसँग रमाइलो कुराकानी गरेका छन् । एकअर्कालाई निकै प्रेम गर्ने उनीहरुले खुलेर आफ्नो प्रेम देखाएका छन् ।
साथै अन्तवार्तामा उनीहरुले आफ्नो बच्चा पाउने योजना बारे पनि बताएका छन् । उनीहरुले आज आफ्नो दोस्रो एनिभर्सरी मनाउन पाउदा निकै खुशी लागेको बताएका छन् । अन्तवार्तामा सबैको साथले अहिले न्युरोडमा पार्लर खोलेको समेत बताए ।
बेबी प्लानको बारे कुरा गर्दै उनीहरुले अहिले आफुहरुको पेट पाल्न गाह्रो भएकाले पछि त्यसकारे सोच्ने बताए । भिडियोमा हेर्नुहोस् पुरुष जोडीले यसरी मनाए दोश्रो वैवाहिक वर्षगाँठ